सावधान ! क्याटवरीको डेरीमिल्क चकलेटमा भेटियो किरा(भिडियो) – Khabaarpati
सावधान ! क्याटवरीको डेरीमिल्क चकलेटमा भेटियो किरा(भिडियो)
January 4, 2021 goodmamLeaveaComment on सावधान ! क्याटवरीको डेरीमिल्क चकलेटमा भेटियो किरा(भिडियो)
नेपाली बजारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी क्याटवरीका उत्पादन डेरीमिल्क र यसका चकलेटहरु लोकप्रिय मानिन्छ ।तर ससाना बालबालिकादेखि सबै उमेरसम्मले मन पराउने डेरीमिल्कको सिल्क बबलमा नामक चकलेट भित्र किरा फेला परेको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
काठमाडौं बत्तिसपुतलीका स्थानीय व्यवसायी सम्राट बुढाथोकीले किनेको क्याटवरी कम्पनीको उत्पादन डेरीमिल्क भित्र किरा भेटेका हुन् । शुक्रबार स्थानीय डिर्पाटमेन्ट स्टोरबाट छोराकालागी किनेर ल्याएको डेरीमिल्कको सिल्क बबल नामक चकलेट भित्र किरा भेटेको बुढाथोकी बताउँछन् ।
क्याटवरी कम्पनीको उत्पादन, सिल्क बबल नामक यस चकलेटको खोलमा उत्पादन मिति सन् २०२० अक्टोबर लेखिएको छ । अर्थात यो चकलेट केवल २ महिनाअघि उत्पादन भएको देखिन्छ । यसको बाहिरी खोल पनि राम्रो छ । तर खोल भित्रको चकलेट भने सडेको छ । त्यति मात्र होइन चकलेटभित्र जिउँदो किरा भेटिएको बुढाथोकी बताउँछन् ।
भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्ः
विवाह गरेको तीन मिनेटमै ‘डिभोर्स’ !! कारण सुन्दा दुनियाँ चकित…
गोप्य राख्नुहोस् संधै यी ७ कुराहरुः तपाईको जीवन सफल हुनेछ
मलाई होटलमा लगेर कर णी गर्यो भन्दै झुटो आरोप लगाउने महिलालाई तीन वर्ष छ महिना कैद
March 16, 2021 goodmam
भागेर बिवाह गरेको २० दिन पछि युवती युवकको घर पुग्दा जे देखिन…..
नयाँबस्तीमा भएको घटनाको शवको अवशेष फेरी पनि अर्को फेला पर्यो
ज्ञानेन्द्र शाही माथि भएको ह’मला बारे बोले रवी लामिछाने : लेखे यस्तो मन छूने स्टाटस June 13, 2021
पोखरामा सांसदले प्रहरी निरीक्षक थर्काए, प्रहरीले दिएको जवाफले सांसद नै भए लज्जित (भिडियो हेर्नुहोस्) June 13, 2021
भर्खरै सरकारले निषेधाज्ञा बढायो, सवारीसाधन जोरबिजोर खोल्न दिने बिषयमा दियो यस्तो सूचना June 13, 2021
आज थपिएको निषेधाज्ञा यी इलोक्ट्रोनिक, हार्डवेयर पसल देखि यी पसल खुल्ने June 13, 2021